Ny Birao Mpitsidika ao Guam dia manana filoha sy tale jeneraly mahatalanjona vaovao
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny Birao Mpitsidika ao Guam dia manana filoha sy tale jeneraly mahatalanjona vaovao
Ny olona vaovao miandraikitra ny fizahan-tany Guam dia ao amin'ny faritany amerikana guam governora teo aloha Carl Guitierrez. Guitierrez dia notendrena ho filoha vonjimaika sy CEO an'ny Birao mpitsidika an'i Guam taorian'ny taloha Misotro ronono ny tale jeneraly Pilar Laguaña nandritra ny 40 taona nanompoany ny Guam Travel and fizahantany fizahan-tany.
I Guam dia ao anatin'ny toe-javatra mitovy amin'ny ankamaroan'ny toerana fitsangatsanganana sy fizahantany any Etazonia. Hotely sy sidina banga, morontsiraka lao, ary trano fisakafoanana mihidy. Coronavirus dia naka ny faritanin'i Etazonia izay nisy sidina adiny iray monja avy tany Manila
Ny krizy rehetra dia fotoana iray mety. Ny capita stimulus tohanan'ny federaly dia azo ampiasaina hamerenany vola amin'ny ho avy vaovao amin'ny fizahan-tany Guam.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamina famoahana teo an-toerana (PNC), Guitierrez dia nilaza hoe: Ny fahafaha-manaon'i Guam dia mamerina mandinika ny indostrian'ny mpitsidika ary manoritra làlana mankany amin'ny fanarenana maharitra.
Ny governora teo aloha dia naniry ny hahatonga an'i Guam ho toerana tsy manam-paharoa kokoa, mifandraika amin'ny kolontsaina, any Chamoru-centric, ary amin'ny lafiny ara-tontolo iainana izay azo aleha kokoa noho ny hatramin'izay.
Ireo mpitsidika dia tokony hahatsapa ho voaro, tsy manana ahiahy ary mahazo antoka ara-pahasalamana amin'ny teboka fidirana hatramin'ny alàlan'ny sidina miverina.
Ny fomba fiasa toy izany dia mitaky fanekena eo amin'ireo mpilalao indostria fa miaraka isika rehetra ao ary mila sehatra fiaraha-miasa tsy manam-paharoa. Ary izany indrindra no kasain'ny ekipako hotanterahina, miaraka amin'ny tso-dranon'ny Governora Lou Leon Guerrero sy ny lefitry ny governora lefitra Josh Tenorio ary ny fanekeny. Manantena koa izahay fa hahazo ny fanajana, ny fanohanana ary ny fampidiran-dresaka sarobidy an'ny Mpampiresaka Tina Muna Barnes sy ny mpanao lalàna faha-35, ”hoy ny governora teo aloha nanampy.
Araka ny nitaterana voalohany tao amin'ny PNC Guam, ny governora teo aloha dia manana traikefa betsaka amin'ny fiatrehana zava-tsarotra.
Amin'ny maha governora vao voafidy tamin'ny 1995 dia nandova fatiantoka mavesatra i Gutierrez izay toa tsy nisy fomba hihaonana amin'ny karama intsony.
Saingy i Gutierrez notantanan'i Gutierrez vola GovernGuam tao anatin'io krizy io ary tsy ela dia afaka niverina tamin'ny fanambinana ny tapaky ny taona 80 sy ny voalohandohan'ny taona 90 ny fitondrany.
Avy hatrany dia niantso ny mpitarika orinasa i Gutierrez, eny fa na dia ireo mpanohitra ara-politika azy aza, ary nangataka azy ireo hanampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny maha-zava-dehibe ny harinkarenan'i Guam.
Gutierrez koa dia zanaky ny ady, teraka tamin'ny 1941, roa volana latsaka talohan'ny fanapoahana baomba an'i Pearl Harbor sy Guam.
Tamin'ny 1997, ny governemanta Gutierrez dia namaky ny firaketana ny fizahan-tany nandritra ny fotoana rehetra tamin'ny fahatongavana mihoatra ny 1.4 tapitrisa. Ary tamin'ny 1998, Gutierrez dia namerina namorona, namerina namorona ary namoha ny fon'ny Tumon izay fantatra ankehitriny amin'ny anarana hoe "Pleasure Island." Nanampy an'i Guam hiverina tamin'ny fianjerana Koreana tamin'ny taon-dasa izy io ary nanangana hery vaovao.
"Saingy efa roapolo taona lasa izay ary ankehitriny dia tokony hanana foto-kevitra vaovao mifanaraka amin'ny filàna sy ny andrasan'ny tontolon'ny areti-mifindra sy ny valanaretina izahay", hoy i Gutierrez tamin'ny PNC.
Araka izany, nilaza i Gutierrez fa mila manokatra ny indostrian'ny mpitsidika an'i Guam haingana sy haingana araka izay azo atao i Guam.
Ho fanampin'izany, ny protokolà fitsangatsanganana vaovao dia tokony hampiditra fitsapana ao anatin'ny 72 ora alohan'ny hidirana sy hivoahana any Guam, ary koa ny fanolorana mari-pankasitrahana COVID-19 eken'ny governemanta alohan'ny hidirany amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena.
Izany dia hitaky ny fifampiraharahana momba ny protokolokam-pifanarahana mifamadika amin'ireo firenena mifanila aminy ary avy eo, fanitarana amin'ny firenena hafa manomboka amin'izany.
Ny maodely Islandy
Naka famantarana avy any Islandy, Gutierrez koa dia mandinika ny fahaizan'ny manafoana ny vanim-potoana quarantine 14 andro tsy maintsy atao ho an'ireo mpitsidika izay mandray sy mandalo fitsapana COVID-19 maimaim-poana rehefa tonga eny amin'ny seranam-piaramanidina. Fa na iza na iza manaporofo tsara dia tokony mbola hitokantokana mandritra ny 14 andro.
I Islandy koa dia nahavita nampihatra fampiharana fampiharana COVID-19 izay efa ampiasain'ny ampahatelon'ny mponina 364,000 miampy.
"Ny governemanta any dia mihevitra ny handidy fa tsy maintsy ampiasain'ny mpitsidika ity fampiharana ity - noho izany zavatra iray izay dinihinay koa fa mety ho an'i Guam," hoy i Gutierrez.
Amin'ny maha ivotoerana fitetezana ny Pasifika Andrefana azy dia nilaza i Gutierrez fa tsy maintsy manamafy haingana ny lazany i Guam ho toerana tsy dia atahorana loatra rehefa hiara-hiasa amin'i Saipan, Tinian, Rota, Palau, ary ireo toerana samihafa any Micronesia.
Nilaza izy fa ny fonosam-paritra izay mampiroborobo ny fiarovana ny fivezivezena dia hanampy ny mpitsidika hahatsapa ho voaro rehefa mandehandeha amin'ny faritra tsy misy virus amin'ny nosy iray ka hatrany amin'ny lalana hafa misy eo amin'ny samy nosy sy ny dia lavitra.
“Izany no antenain'ny mpandeha aziatika, indrindra, rehefa miverina amin'ny dia lavitra izy ireo. Ireo nosy mitokana any Pasifika Andrefana dia tratry ny aretina tsy dia nahitana aretina firy ary ny sasany kosa voalaza fa tsy nahazo aretina. Palau tsy misy COVID, izay voalaza fa nankafy ny fiarovana fanampiny amin'ny fanandramana sy ny fisorohana virus coronaavirus Taiwanese, dia efa mijery ny vinavinam-borona azo itokisana miaraka amin'i Taiwan, "hoy i Gutierrez.
“Ny fandraràna ny fidiran'ny mpandeha avy any amin'ny faritra tena voa mafy amin'ny firenena, ny fanarahana ny fitsidihan'ny mpitsidika vao haingana, ny fakana mari-pana, ny fanadiovana ary ny famolavolana ireo“ faritra azo antoka ”ho an'ny mpitsidika dia hitondra fiadanam-po avokoa ka hahatsapan'ny olona ny tokin'ny tenany. toky amin'ny tontolo ivoahan'izy ireo sy apetrany, "hoy ny governora teo aloha nanampy.
Nasongadin'i Gutierrez ihany koa fa ny toerana izay haingana indrindra manitsy ny fangatahana tsena miova amin'ny alàlan'ny fanaovana izay hahatsapana ho azo antoka sy raisina an-tanan-droa ireo mpandeha nefa miaina fahaiza-mandray vahiny dia hahazo valiny voalohany. Ary ireo izay mijanona ho mavitrika amin'ny valiny fohy, midterm ary drafitra maharitra ary fanatanterahana dia ho lasa mpivarotra fironana amin'ny marketing.
Trano fisakafoanana an-kalamanjana
Mba hanampiana ireo trano fisakafoanana eo an-toerana hamaky ny fifanenjanana eo amin'ny lafiny sosialy amin'ny fanilihana ny mpanjifa nefa very vola amin'ny latabatra foana, nilaza i Gutierrez fa afaka maka mari-pahaizana avy any Berkeley, California ary Vilnius, Lithuania i Guam - toerana mikasa ny hanendry faritra fisakafoanana malalaka ho an'ny mpiaro sy hamporisika kafe fisakafoanana an-kalamanjana.
“Berkeley dia manenjika lalàna ahafahana manakatona ny arabe iray manontolo noho io tanjona io. Angamba i Guam dia afaka 'nanaloka' ny valan-javaboary sasany, plaza, toeram-pijanonana ary "faritra azo antoka" - na koa ny efitrano fisakafoana an-tsokosoko misy fisotroana marika. Mazava fa tsy maintsy mahita fomba mahomby hiarovana ny fomban-drazana matanjaka amin'ny sakafo any Guam isika amin'ny alàlan'ny fanolorana safidy amin'ireo trano fisakafoanana sahirana rehetra. Ny orinasa biriky sy mortara sasany aza mety mieritreritra ny hanetsika ny kamiao hohanina tsy misy otrikaretina hitazomana ny marika sy ny menio ankafiziny, ”hoy i Gutierrez.
Mandritra izany fotoana izany, ho an'ny maharitra, nilaza i Gutierrez fa ny fanitsiana indostrialy fandraisam-bahiny misimisy kokoa dia tsy maintsy aroso miaraka. Ary tsy misy fotoana tsara kokoa noho ny ankehitriny ho an'ny trano fandraisam-bahiny, fitsangatsanganana an-tsokosoko, ary fisarihana handinihana sy hanaovana fanavaozana ary koa protokolan'ny fahasalamana sy ny fahazoan-dàlana eken'ny governemanta ary ny governemanta hanohana ny fanatsarana ny renivohitra koa.
Gutierrez koa dia niara-niasa tamin'ny mpampiasa vola sy ny mpamorona hanomboka ny fampandrosoana "Tumon II" any amin'ny faran'ny atsimon'i Urunao. Ity fahitana eo amin'ny sehatra tsy miankina ity dia nanomboka telo taona lasa izay, saingy tokony haverina ny fe-potoana satria nilaza i Gutierrez fa mbola tsy mandaitra araka ny tokony ho izy ny mpiasan'ny governemanta sy ny mpanjifany.
"Izany no nahatonga ny ekipako sy ny ekipako naka fomba telo hanamafisana ny fahazoan-dàlana: (1) mpiandry mpiandry tena manokana amin'ny alàlan'ny fankatoavan'ny maso ivoho, (2) manetsika ny hetsi-pibaikoan'ny Lt. Governora Tenorio hanavao ny fombafomba mamela ny governemanta, ary (3) fiaraha-miasa amin'ireo mpandamina matihanina sy loharanom-bola hivelarana amin'ny vavahady mamela alalana an-tserasera. Ity rafitra ity dia hamindra ny fahazoan-dàlana manomboka amin'ny tsipika fiandrasana, hajia, ary taratasy mankany amin'ny tobim-pifandraisana iray mamela ny masoivoho, mpampiasa vola, mpandrindra ary mpifanaraka handinika ny fankatoavana amin'ny fotoana tena izy amin'ny sehatra ifampizarana. Izy io aza dia hanampy ireo mpampiasa vola sy mpamorona hanao fikarohana miaraka amin'ny fitaovana fanaovana saritany misy sosona sy ny fahombiazany hafa, "hoy i Gutierrez.
Raha ny filazan'ny filohan'ny GVB vonjimaika dia efa manomboka manova ny Tumon ny paosin'ny fampandrosoana ny fananan-tany sy ny fampandrosoana indray ary matoky izy fa ireo mpandraharaha indostrialy mpitsidika hafa dia hanohy tetikasa vaovao sy fanamboarana ilaina, raha avela ny fotoana, ny toe-javatra, ny renivohitra vaovao ary ny fahombiazan'ny governemanta.
Olona manampy olona
Tahaka ny nataony nandritra ny fotoana naha governora azy, Gutierrez dia mahazo hevitra sy mangataka toro-hevitra avy amin'ny mpitondra sy ny andrin'ny fiarahamonina.
"Faly aho amin'izao fotoana izao amin'ny fisotroan-dronono Filoha GVB ary CEO Pilar Laguana noho ny fitaterana sambo tery toy izany any amin'ny foibe ary namela ahy hidina amin'ny tany mandeha amin'ny tetezamita malefaka. Faly ihany koa aho ny torohevitra vao haingana momba ny vaovao sy nalalaka azoko tamin'ny praiminisitra Guam voalohany sy ny mpandraharaha tsy miankina Mark Baldyga momba ny fomba tsara indrindra handehanana amin'ny fanokafana ny indostrian'ny mpitsidika anay. Hainy mialoha fa ny sehatry ny fizahan-tany misy mofo sy dibera dia manakaiky ny famaranana ary nanomboka nanao sarintany lalana hiverina any amin'ny orinasa na dia talohan'ny nanombohan'ny fitsapana COVID aza. Ny indostria sy izaho dia misaotra an'i Milton Morinaga sy Ken Corporation noho ny fanolorany làlana mankany amin'ny fanarenana miaraka amin'ny fisokafan'ny trano fisakafoanana amoron-dranomasina izay fantatra amin'ny anarana hoe The Tsubaki Tower Guam, "hoy i Gutierrez tamin'ny PNC
Nilaza i Pilar Lahguana eTurboNews:
Te hampahafantatra anao amina mpitarika mahatalanjona iray aho, ny Governora teo aloha Carl Gutierrez, izay notendren'ny talen'ny talen'ny talen-tsika ho filoham-pirenena vonjimaika. Ny governora teo aloha Gutierrez dia notendren'ny Governora hajaina Lou Leon Guerrero hitarika ny birao sy ny indostrian'ny fizahantany ao amin'ny nosy rehefa miomana ny hamoha sy handray ireo mpitsidika hiverina any Guam izy ireo, ary rehefa miomana ny Guam hanangana ny toekarem-pizahantany avy amin'ny areti-mandringana Coronavirus. Izy dia mpitarika niavaka, be zotom-po ary voaporofo niaraka tamin'ny asam-panjakana am-polony taonany.
Miitatra amin'ny firenena 31 ny fialantsasatra fahavaratra ho an'ny Alemanina
Rosia hanomboka hiala sasatra amin'ny famerana ny dia an-trano amin'ny 1 Jona